लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्वको लडाइँ कहिलेसम्म ! - News Madhesh
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्वको लडाइँ कहिलेसम्म !
काठमाडौँ, १७ असार । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जन्मेपछि आफ्नो मानवाधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानवाधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो समुदाय पहिचानकै लागि लडिरहँदा शिक्षा, स्वास्थजस्ता आधारभूत कुरामा पछि परेका छन् । समाजमा अझै पनि बाँच्न कठिनाइ भएको गुरुङले सुनाउनुभयो । पाँचको आत्महत्या “समाजको हेला सहेर बाँच्न मन छैन भनेर सन्देश आउँछ, बन्दाबन्दीमा पाँच जना साथीले आत्महत्या गरे, पहिला सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।